PCB Manufacturing Na Mgbakọ - PCBFuture
Isiokwu: PCB nzukọ, PCB n'ichepụta na nzukọ, PCBA ikike
PCBFuture nwere sistemụ njikwa njikwa siri ike yana asambodo niile dịka TS16949, UL, RoHS, CE, ISO, wdg. Maka PCB, anyị nwere Flying Probe Test na E-Testing. Maka PCBA, anyị nwere IQC, AOI, Nnwale Ọrụ, QA. Ndị a bụ isi ma dị ezigbo mkpa ihe maka PCB ụlọ ọrụ.
Dị ka ndị kasị ewu ewu ụlọ ọrụ mgbakọ kọmputa na China, anyị na-enye zuru-spec electronic n'ichepụta ihe ngwọta maka afọ 10 iji gboo mkpa nke ahịa ndị China.
Anyị nwere ndị ahịa sitere na ụlọ ọrụ dị iche iche maka ịba uru, ogo, nnyefe yana ihe ọ bụla ọzọ achọrọ. Site PCB layout PCB prototyping, uka n'ichepụta, na mgbe ahụ PCB nzukọ, electronic igbe nzukọ ọrụ, anyị biri ebi sekit mbadamba na-ọtụtụ-eji robotics, ọgwụ na ahụ ike, akpakanamde, nkwukọrịta, ulo oru na n'ji ngwá electronic na ngwaahịa.
Anyị na-arụ na ndị na-esonụ ulo oru: mgbanwe PCB, omenala PCB, prototype PCB, turnkey PCB nzukọ, electronic PCB nzukọ, obere ogbe PCB nzukọ, wdg
Mere họrọ anyị PCB n'ichepụta na nzukọ:
1.Extremely elu nkenke na nkenke-Anyị prototypes bụ magburu onwe ya na izi ezi na ike izute ahịa nkọwa. Nke a bụ n'ihi na anyị ji ịdị mma na nkọwa nkọwa kpọrọ ihe.
2.Fast turnaround-anyị ghọtara uru nke oge ndị ahịa. Ya mere, anyị na-agbasi mbọ ike imepụta ụdị ihe ngosi gị na oke ọsọ. Ya mere, anyị ngwangwa prototype PCB nzukọ ọrụ nwere ike ebelata gị na-eche oge site a izu ole na ole ka a nkeji ole na ole.
3. Ọnụ ego dị oke ọnụ-anyị nwere usoro zuru ezu iji nyere gị aka idobe ọnụ ala na ọnụ ala. Yabụ, anyị ga-eji atụmatụ dị oke mkpa mezue ọrụ gị.
4.Error mgbazi-Anyị PCB prototype dị ezigbo mkpa ịchọta ntụpọ, n'ihi ya, ọ nwere ike izere isi ọdịda mgbe e mesịrị. Iwepu ntụpọ ndị a ngwa ngwa o kwere mee nwere ike ịchekwa gị oge na ego
5.Ndenye uzo PCB nzukọ- ị nwere ike ịrịọ maka ụdị PCB. Only na mkpa n'okpuru PCB imewe na-enweta na-arụpụta.
6.Sleple ule tupu arụpụta zuru ezu - Anyị na-enye gị ohere ịnwale mbadamba mbido ma gosipụta ma ha na-arụ ọrụ dịka achọrọ.
PCB nzukọ ikike:
Na-arịgo elu (SMT)
SMT & THT ngwakọ
Otu ma obu uzo abuo
BGA na ndị ọzọ
Ozi a choro maka PCBA:
N'okpuru ebe a bụ ndepụta nke elektrọnik na ihe ndị metụtara ya bụ ndị dị mkpa maka mgbakọ ọgbakọ sekit biri ebi:
• E Bipụtara Circuit Board (PCB)
• Akụrụngwa eletriki dị ka ndị na-eguzogide.
• Soldering ihe dị ka waya, preform, mmanya, agbanwe agbanwe na mado.
• Soldering ngwá dị ka efegharị efegharị soldering igwe, n'elu mounter, SMT-Stencil, soldering eletrik na ule ngwaọrụ wdg
Ebe ọ bụ na PCBFuture guzobere, anyị na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arụkọ ọrụ ọnụ na ụlọ na mba ọzọ na echiche nke ogo mbụ na onye ahịa bụ chi nke nwetala nnukwu ewu ewu. Anyị enwetawo ntụkwasị obi na nkwado nke ụlọ ọrụ sitere na mba 40 na ọnụahịa asọmpi, ngwaahịa dị mma na ọrụ dị mma.